I Eorôpa dia kontinenta hita manontolo ao amin'ny ila-bolantany avaratra sady manana ny ampahany be amin'ny taniny ao amin'ny ila-bolantany atsinanana, izay voafaritry ny kontinentan'i Azia avy ao atsinanana, ny Ranomasina Mediteranea avy ao atsimo, ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasin'i Norvezy avy ao andrefana, ary ny Ranomasimbe Arktika avy ao avaratra i Eorôpa. Matetika dia zaraina ho faritra efatra i Eorôpa ka ahitana an'i Eorôpa Avaratra, i Eorôpa Andrefana, i Eorôpa Afovoany, i Eorôpa Atsinanana ary i Eorôpa Atsimo.
I Eoropa dia tenenina matetika fa anisan'ny kontinenta enina misy eto an-tany. Izy io dia ny faritra andrefana amin'i Eorazia na faritra avaratra ao amin'ny kontinentan'i Afrô-Eorazia, arakaraky ny fomba fijery. Ny solonanarany dia hoe "Tontolo Antitra", satria mifanohitra amin'ny "Tontolo Vao" (i Amerika). Ao Eoropa dia misy kolontsaina maromaro manana fianjadiana ary lova iraisany.
Ny Eoropa dia kontinenta faharoa kely indrindra eto an-tany amin'ny lafiny velarantany (10,18 tapitrisa km2), na 2%-n'ny velaran'ny tany maina na 6,8%-n'ny velarantan'ny Tany. Misy firenena dimampolo ao Eorôpa, ary i Rosia no ngeza indrindra amin'ireo na amin'ny lafiny isa-mponina na amin'ny lafiny velarantany, ary i Vatikàna no firenena kely indrindra amin'ireo, na amin'ny lafiny isa-mponina na amin'ny lafiny velarantany. I Vatikàna koa no firenena kely indrindra eto an-tany.
Araka ny Firenena Mikambana, dia mety milatsaka ho 7% ny tahan'ny isan'ny mponina ao Eorôpa amin'ny 2050 raha 25% izany tamin'ny taona 1900, 25%.
Any Eoropa, ny Gresy taloha no toerana nahaterahan'ny kolontsaina eorôpeana. Nahazo lanja ny firenena eorôpeana tamin'ny taonjato faha-16, indrindra taorian'ny fiantombohan'ny fanjanahan-tany. Teo anelanealn'ny taonjato faha-16 sy ny taonjato faha-20, ny firenena eorôpeana dia nanana zanatany tany Amerika, indrindra tamin'ny taonjato faha-17 sy faha-18, tao amin'ny ankabeazan'i Afrika, tao Oseania, ary tao amin'ny tapany avaratra sy atsimon'i Azia. Ny Ady lehibe rehetra dia niainga avy tao Eorôpa, nampahazo lanja an'i Etazonia sy ny Firaisana Sôvietika teo anivon'ny taonjato faha 20. Nandritra ny Ady mangatsiaka dia voazara roa i Eoropa: ny faritra andrefana dia ao amin'ny OTAN ary ny faritra atsinanana dia entin'ny Fifaneken'i Varsôvia, nampidy ny Fiaro Vy ("Rideau de Fer" amin'ny teny frantsay).
Eorôpa Avarfatra Andrefana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Eorôpa&oldid=995773"
Dernière modification le 1 Aogositra 2020, à 12:02
Voaova farany tamin'ny 1 Aogositra 2020 amin'ny 12:02 ity pejy ity.